प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा असार २८ गते फैसला आउने
फरकधार / २१ असार, २०७८
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटको फैसला आगामी असार २८ गते आउने भएको छ ।
सोमबार एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आगामी २८ गते फैसला आउने जानकारी दिएका हुन् ।
सोमबार एमिकस क्युरीका​ तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश बहादुर केसीले अन्तिम बहस गरेका थिए ।
उनको बहस सरकारका पक्षमा थियो । बहसका क्रममा उनले सांसदहरु दलको अनुशासनमा बस्नुपर्ने बताए ।
बहसका क्रममा केसीले संविधानको व्याख्या गर्दा ७६(५) प्रतिनिधिसभा सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको उल्लेख गर्दै आधार भनेको विश्वासनीय हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक र पालक भनेको छ। संविधानको रक्षकले संविधान कार्यान्वय हुने आधार हेर्नुपरेन ? उनले भने, ‘संविधानको धारा ७६(७)ले ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा नियुक्त हुन नसकेमा भन्यो। नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको मतलब राष्ट्रपतिबाट नियुक्त नहुने अवस्था रहन्छ भन्ने हो।’
राणाको प्रश्न : राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्न पाइन्छ त ?
उनको बहस बीचमा रोक्दै प्रधानन्यायाधीश राणले सोधे, ‘जस्तो प्रधानन्यायाधीशलाइ बेच्न तोक्ने अधिकार छ, तर म तोक्दिनँ भनेर बस्न मिल्छ ? उपधारा ५ को अधिकार भनेकै प्रधानमन्त्री जन्माउने अधिकार हो, अब प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिनँ भन्न पाइन्छ त ?
उपधारा २, ३ को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन पार्टीको पत्र भएर नहुने सांसदले नै भोट हाल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अर्को प्रश्न थियो, ‘विश्वको मत लिन त पार्टीको पत्रले होइन भोट नै हाल्नुपर्छ । भोट हाल्ने सांसदको मलाई समर्थन छ, भनेर सदस्यको हस्ताक्षर लिएर गएपछि राष्ट्रपतिले म नियुक्त गर्न पाउँदिन भन्ने हुन्छ त ?
बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीशले यो रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राख्ने बताउँदै आगामी २८ गते फैसला आउने जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति : असार २१, २०७८ साेमबार १७:४:१८, अन्तिम अपडेट : असार २१, २०७८ साेमबार १७:२१:११